May 3, 2021 - Achawlaymyar
( ၂၀ ) ကျော်တွေထက် အသက် ( ၃၀ ) ကျော်မမတွေက ပို ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေရခြင်း အကြောင်းအရင်း ( ၇ ) ချက်..
May 3, 2021 by Achawlaymyar
( ၂၀ ) ကျော်တွေထက် အသက် ( ၃၀ ) ကျော်မမတွေက ပို ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေရခြင်း အကြောင်းအရင်း ( ၇ ) ချက်.. ဒီနေ့ခေတ် အသက် ၃၀ ကျော် အမျိုးသမီး တွေဟာ ၂၀ ကျော် အရွယ် မိန်းကလေး တွေထက် ပိုပြီးလည်းလှ ပိုပြီးလည်း စမတ်ကျ ကြည့်ကောင်း နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အပေါ်ယံ လှနေတာမျိုးပဲ မဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ….. အပြောအဆိုနဲ့ ခံယူချက် စတာတွေကလည်း လေးစားစရာ ကောင်းနေပြီး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံလှပတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဖြစ်နေတာဟာ … Read more
အရမ်းချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုတာ ဒီအချက်(၅)ကြောင့်ပါ
အရမ်းတော့ချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တုန်းကမှ ကံမကောင်းခဲ့တဲ့ လူတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ဘက်ကချို့ယွင်းချက်ရယ်လို့မရှိပေမယ့် ဘာကြောင့်အချစ်ရေးကံမကောင်းရတာလဲဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည်နိုင်သလို၊ ဒီအတွက် အဖြေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲ့ဒီအချက်အတွက် အဖြေရှိလာပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ အရမ်းချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်ရေးကံမကောင်းခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်၊ မဟုတ် တိုက်ကြည့်လိုက်နော်။ (၁) ပုံပြင်တွေကိုယုံနေတယ် သင့်အနေနဲ့ နတ်သမီးပုံပြင်တွေကို ယုံကြည်နေပြီး ပုံပြင်ထဲကလို သင့်ကို လုံးဝနားလည်ပြီး အချစ်ကြီးချစ်နိုင်မယ့်သူမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေတတ်တယ်။ ပုံပြင်တွေထဲကလို အခက်အခဲတွေအားလုံးကို ကျော်လွှားပြီး ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်မျိုးကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးယဉ်လွန်းနေတော့ လက်တွေ့ဘဝမှာ တွေးထားသလိုမဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးလို့ ထင်လာပါတော့တယ်။ (၂) ဂရုစိုက်တတ်လွန်းတယ် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ သူ့ရဲ့အရာရာကို ဂရုတစိုက်ရှိလွန်းတာ၊ အသေးစိတ်ကအစဂရုစိုက်ပေးလွန်းတဲ့အခါ ကြာလာရင် … Read more
ညီမအစ်မ ဒီနေ့ စမ်းချောင်း ရွှေလောင်းcb backပိုက်ဆံသွားထုတ်တာ ၉ခွဲကနေ ၁၂ထိကို အဲ့တနေရာကနေကို မရွေ့ပါဘူး ….အရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ တမိသားစုလုံး လာထုတ်ကြပြီး ထုတ်ပီးရင် အနောက်ကနေတန်းမစီပဲ သူတို့မိသားစုနားမှာတင် ပြန်နေပြီးထပ်ထပ်ထုတ်နေကြရော ညီမ အမကနေပြီး အနောက်ကလူတွေကိုလဲအားနာပါအုံးဆိုပီးပြောတာကို မကျေနပ်ရင်နင်တို့တမိသားစုလူံး ခေါ်လာခဲ့ဆိုပီး အော်ပါလေရော လူအများက ရဲနဲ့မတွေ့ချင်လို့ရှောင်ချင်လို့ပြသနာမဖစ်တာကိုအခွင့်ရေးယူပြီး တလှည့်စီပတ်ထုတ် နေကြတာပါ ၁၂ခွဲကြတော့ ညီမ အမကနေပြီး အနောက်ကိုလဲကြည့်ပါအုံးဆိုပီး ထပ်လှမ်းပြောတာကို တမိသားစုလုံး သားနှစ်ယောက်ရောအဲ့နားက ကွမ်းယာဆိုင်က သူတို့အမျိုးတွေကပါ ခုံတွေနဲ့ဝိုငိးရိုက်ကြပါတယ် ￼ ပုံထဲက မိန်းမနဲ့ ယောက်ကျားရော သူတို့အမေတွေ အဒေါ်တွေပါ ဆံပင်ဆွဲ ခုံနဲ့ဝိုင်းရိုက်ကြတာပါ အများနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဝိုင်းလူပ်ကြတာ မြင်မကောင်းပါဘူး ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေအဲ့လောက် လုပ်ဖို့ လိုလားဟင်? ခေါင်းတွေလဲနာ နှုတ်ခမ်းတွေလဲပေါက်သွားပါတယ် တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ပွန်းပဲ့နေတာပါပဲ 😓 ညီမကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ … Read more
“မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပြစိပြစိလုပ္ေနေသးရင္ တန္ဖိုးထားပါ”
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က မလိုအပ္ ပဲနဲ႔ စကားေတြ အမ်ားႀကီး မေျပာတတ္ဘူး အေရးမ ပါပဲနဲ႔လဲ ေလကုန္မခံ တတ္ဘူး ဟိုလို မလုပ္နဲ႔ ဒီလို မလုပ္ တားေနေသးတယ္ ဆိုတာ စိတ္ပူေနေသးလို႔ လို႔သာ မွတ္ပါ ၿပီးေတာ့ သဝန္တိုတတ္ တယ္ဆိုတာ မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ သဘာ ဝပါ ဒါစိတ္ ပ်က္စရာမွ မဟုတ္တာ သဝန္တို တယ္ဆိုတာ ဆုံးရႈံးရ မွာေၾကာက္ တဲ့စိတ္ ေခါင္းစဥ္ေတြ တပ္ခ်င္သ လိုတပ္ၿပီး နာမည္ဆိုးေတြ ထပ္ထပ္မေပးပါနဲ႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပြစိပြစိလုပ္ေနေသးရင္ တန္ဖိုးထားပါ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို ကိုယ္တစ္ေယာက္ တည္း ပိုင္ခ်င္တဲ့ အတၱေတာ့ ခ်စ္တတ္တဲ့ လူတိုင္းမွာ ရွိတတ္ ပါတယ္ တကယ္မ ခ်စ္ပဲနဲ႔ ဘယ္သူက ဆုံးရႈံးရမွာ … Read more
သူတောင် မစဉ်းစားမိတဲ့ကိစ္စ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးမေးလာလို့ အံ့သားသင့်သွားရတဲ့ ဦးသုမောင် “ခင်ဗျားတို့မြန်မာစာက အဝိုင်းလေးတွေချည်းပဲနော်” တဲ့
Unicode Version> သူတောင် မစဉ်းစားမိတဲ့ကိစ္စ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးမေးလာလို့ အံ့သားသင့်သွားရတဲ့ ဦးသုမောင် “ခင်ဗျားတို့မြန်မာစာက အဝိုင်းလေးတွေချည်းပဲနော်” တဲ့ သုမောင်ရဲ့ By the way ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်။ သူ့ကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က မေးတာ “ခင်ဗျားတို့မြန်မာစာက အဝိုင်းလေးတွေချည်းပဲနော် ”တဲ့ ။ သုမောင် အံ့သြသွားတယ်။ သူသတိမထားမိခဲ့တဲ့အရာမို့လို့။ ဘာဖြစ်လို့မြန်မာအက္ခရာတွေ ဝိုင်းနေသလဲသိချင်ရင်ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ။ မြန်မာဗျည်း(၃၃)လုံး ဆိုတာ ဘယ်လို စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။ သေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ မြန်မာဗျည်း( ၃၃-လုံး) ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း ပြောရာမှာ ဗျည်းရော သရရော မြန်မာအက္ခရာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာက စပြောဖို့လိုမှာပေါ့။ မြန်မာအက္ခရာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာBC- 500 လောက်ကနေ700 -ကျော်အထိ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ဗြာဟ္မီ (Brahmi) အက္ခရာက ဆင်းသက်လာကြောင်းပညာရှင်တွေက … Read more
စာဖတ်သူတွေထဲမှာ နေ့စဉ်ဖုန်းမသုံးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဖုန်းသုံးကြတဲ့အခါ တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်မက ဖုန်းအားသွင်းတတ်ကြပါတယ်။ဖုန်းအားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းလိုလိုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားအယွင်းလေ တွေကို သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဖုန်းအားသွင်းကြိုးကို ပလပ်ပေါက်မှာ အမြဲတပ်ထားခြင်းက အခန်းတွင်းစိုထိုင်းဆနဲ့ဓာတ်ပြုပြီး မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ ဖုန်းအား သွင်းပြီးတိုင်း အားသွင်းကြိုး ကိုဖြုတ်ထားပါ။ ဖုန်းအားကို ၁၀၀ ပြည့်တဲ့အထိသွင်းထားတာက အားကုန်ဖို့ပိုလွယ်စေတာကြောင့် ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါ ၉၈ လောက်ဖြစ်ရင် ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။ဖုန်းအားကုန်ပြီးပိတ်သွားတဲ့အထိသုံးခြင်း၊ ဖုန်းအား ၁၀ အောက်ရောက်မှ အား သွင်း ခြင်းက ဖုန်းဘက္ထရီကိုလွယ်လွယ်ပျက်စေပါတယ်။ ဖုန်းအား၂၀အောက်ရောက်တာနဲ့ ားပြန်သွင်းတာကဖုန်းဘက္ထရီသက်တမ်းကို ပိုကြာရှည်စေပါတယ်။ဖုန်းကိုတစ်ညလုံးအားသွင်းထားတာက ဖုန်းဘက္ထရီ မြန်မြန်ပျက်အောင် လုပ်နေသလိုပါပဲ။ဖုန်းအားသွင်းထားတုန်း ဖုန်းသုံးတာက ဘက္ထရီပေါက်ကွဲခြင်းကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်လို့ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဖုန်းအား ၂၀ အထက်ရှိနေတဲ့အခါ ဖုန်းအားသွင်းတာကလည်း ဖုန်းကို မြန်မြန်ပျက်စေ နိုင်ပါတယ်။ အောက်ရောက်မှ ဖုန်းအားသွင်းတာက အသင့်တော်ဆုံးပါ။မူလ အားသွင်းကြိုးမဟုတ်ဘဲ တွေ့ကရာအားသွင်းကြိုးတွေနဲ့ သွင်းတာကလည်း … Read more
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး
News.AU မှ ဖော်ပြချက်အရ အသက်၂၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး တစ်ဦးမှာ ခေါင်းကိုက်ကိုက် နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက် မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက် မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ UK, Gateshead မှာ မိခင်နဲ့ အတူတူနေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး Jessica Cain ပါ။သူမဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တုန်းက ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မသေဆုံးခင်ညတုန်းက Jessica ဟာ မိခင်ကိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပါရာစီတမောတောင်းသောက်ကာ အိပ်ယာစောစောဝ င်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျတော့ မိခင်ဖြစ်သူက သမီးလေး သက်သာလားမေးမလို့ သွားနှိုးခဲ့ပေမယ့် … Read more
ကိုယ်ချစ်သလောက်ပြန်အချစ်မခံရတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်တဲ့ခံစားချက်(၅)မျိုး ကိုယ်ချစ်သလောက် ပြန်အချစ်မခံရတာ ချစ်သူတစ်ယောက်တည်းဆီကမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ၊ မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းတွေဆီကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။ ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ်၊ မေတ္တာထားထား တူညီတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုမျိုးကို မခံရတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် ခံစားချက်အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ကိုယ်ချစ်သလောက် ပြန်အချစ်မခံရတဲ့သူတွေဟာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်ထားတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဖက်က တစ်ဖက်လူကို ခွင့်လွှတ်သည်းခံပါ များနေတော့ သူတစ်ပါးကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ သူတို့အတွက် မခက်ခဲတော့ပါဘူး …။ (၂) ကိုယ်ချစ်သလောက် ပြန်အချစ်မခံရတဲ့ သူတွေဟာ လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း သဘောတရားကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်ထားသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုလူကိုမှ ထစ်ထစ်ချ မယုံကြည်တော့သလို၊ ခုချိန်မှာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းနေလည်း … Read more
ပထမလူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒုတိယ လူပဲျဖစ္ျဖစ ္တန္ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္
ပထမလူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒုတိယ လူပဲျဖစ္ျဖစ ္တန္ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္ ပထမလူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒုတိယ လူပဲျဖစ္ျဖစ ္တန္ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္…… သင့္ကုိ ခ်စ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့လူထက္သင့္ကုိ တန္ဖိုးထားတဲ့ လူရဲ႕ဘဝထဲမွာပဲ ႐ွင္သန္လုိက္ပါ……. သင့္ကုိ ခ်စ္တဲ့ လူထက္ သင့္ အေၾကာင္းကုိ အျပည့္အဝ နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့ လူကသာ သင့္ ဘဝအတြက္ အလုိအပ္ဆုးံ လူပါ…… ေယာက္က်ားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိန္းမပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အရာရာ အေပၚ နားလည္မူနဲ႔ ပထမလူ ရယ္ဒုတိယ လူရယ္လုိ႔ မခြဲျခားပဲသင့္ လက္ထဲ ေရာက္တဲ့ အရာတိုင္းက သင္ ပုိင္ဆိုင္တဲ့ အတြက္သင္ တန္ဖိုးထားတဲ့ အေပ ၚမူတည္ၿပီး တန္ဖိုးက​ေတာ့ ႐ွိေနမွာပါ…… crd … Read more
မေးခဲ့ဖို့သင့်တာ… တနေ့မှာ လယ်သမားအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ ဘဏ်ကို ငွေချေးဖို့ ရောက်လာပါတယ်။ ဘဏ်အရာရှိက သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ – “ဦးလေးက ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ချေးချင်လို့လဲ။” – “တစ်သိန်းပါ” ဘဏ်အရာရှိဟာ ငွေချေးတဲ့ ပုံစံကို သူ့ကို ထုတ်ပေးရင်း ခုလို မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ – “အဲဒီငွေက ဘာအတွက် သုံးမှာလဲ” – “မြို့က ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပြီး ရွာမှာ အမြတ်နဲ့ ပြန်ရောင်းဖို့ပါ” – “ဦးလေးမှာ ဘာအပေါင်ပစ္စည်း ရှိလဲ” – “အပေါင်ပစ္စည်းဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ” – “အခု ချေးသွားတဲ့ ငွေတစ်သိန်းနဲ့ ညီမျှတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့။ ဦးလေးက ချေးထားတဲ့ ငွေကို ပြန်မဆပ်နိုင်ရင် အဲဒီပစ္စည်းကို ဘဏ်က သိမ်းယူခွင့်ရှိပါတယ်” … Read more